Umthandazo eSan Roque.? Ingcwele ngamaxesha obhubhane.
Umthandazo eSan Roque Isixhobo esinamandla kubo bonke abo bafuna ungenelelo lobuthixo kwiimeko ezithile ezinokuvela ebomini, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo.
Amandla yemithandazo ayinakulinganiswa, ngazo sinokuphumelela uloyiso ebelingenako ukoyisa ngenye indlela.
Into efunekayo kukuba umthandazo uphumelele ukukwenza ngokokholo, asinakuphela ngokukucela, kodwa sikwenze ngokukholelwa ngokusuka entliziyweni, ngokunyaniseka nangokuqinisekileyo ukuba impendulo esiyicelileyo kakhulu iya kunikwa.
USan Roque njengomkhathaleli othembekileyo wabantu abasweleyo banokukuqonda ukubandezeleka kwethu xa kukho nasiphi na isifo.
Masisebenzise esi sixhobo kwaye sithandaze ukuba loo mimangaliso siyifunayo ingaka inikezwe kuthi ngexesha elifanelekileyo likaThixo uYise uMdali.
1 Umthandazo kuSan Roque Ngubani uSan Roque?
1.1 Umthandazo kwiSan Roque patron yezilwanyana (elahlekileyo)
3 Ngaba le ngcwele inamandla?
Umthandazo kuSan Roque Ngubani uSan Roque?
Ibali lixela ukuba wayengunyana werhuluneli yaseMontepelfer kwaye wazalwa ngonyaka ka-1378. Ubomi bakhe babuqhelekile kwaye xa wayeneminyaka engama-20, abazali bakhe basweleka.
Ukuba yinkedama eselula, uRoque wazinikezela ekunyamekeleni abagulayo esinye sezona zilwanyana zibhubhisayo zakha zabakho ngelo xesha.
Ibali libhekisa kwinto yokuba, xa wayegcina abaguli, babebaninzi abafumana unyango olupheleleyo nolungumangaliso xa uSan Roque wamenza umnqamlezo ebunzini lakhe.
Akumangalisi oko kuba kwizibhalo ezingcwele sibona ukuba ukuphiliswa kunokudluliselwa kunye nesithunzi, njengoko kwenzekileyo kwi umpostile uPetros.
Ke le nto yokuba umntu elungiselela ukuphilisa enophawu lomnqamlezo kuphela, yinto esinokuyikholelwa ukuba ngummangaliso ovela ngqo kuThixo.
Umhla wakhe ubhiyozelwa rhoqo nge-16 ka-Agasti.
Umthandazo kwiSan Roque patron yezilwanyana (elahlekileyo)
Unenceba i-Roque enenceba,
ukuba uzinike umzimba nomphefumlo kuBawo wethu
kwaye wazithanda izilwanyana ngokusuka entliziyweni
Ke ngoko ungumlandeli wobungangamsha bakhe,
Musa ukubashiya ngaphandle koncedo xa belufuna
Sukubavumela ukuba bazive bangenakuzinceda xa ujongene nobunzima
ubanike yonke into abayifunayo ukuze baphile.
Thandaza eNkosini ndicela ubasikelele ngoFranchesca
kwaye ugcine ubomi bakhe bonke phantsi kokhuseleko kunye nokugcinwa kwakho.
Ulelinye ilungu losapho,
Ngumhlobo neqabane lam,
Nguye ondinika uthando ngaphandle kwemeko,
Uthembekile, uyandithuthuzela, Uyonwabisile imihla yam
kwaye indinika okungaphezulu koko ndikufumanayo.
Ngu-Roque oyiNtanda, othandekayo, ozukisayo weNkosi,
ukuba ngokungummangaliso wancedwa ngumdlwana
Xa abantu bekuyekile ngenxa yokugula,
ngokuthembekileyo ukuzisa imihla ngemihla
kunye nothando lick izilonda zakho ukuze unciphise iintlungu zakho,
ngenxa yoko ungumkhuseli wezilwanyana zasekhaya,
Namhlanje ndiza kuwe ndizele kukuzithemba
nokwazi ukuba ulungile, ulungile
Ndikunikezela kwisilwanyana sam uFranchesca.
Ummangaliso uSan Roque, umkhuseli wazo zonke izilwanyana,
Namhlanje ndiza kuwe ukuza kundinceda ekubandezelekeni kwam,
Sebenzisa amandla akho olamlo phambi koThixo
Ukuze ndimenzele inceba ngenceba yakhe
Endikucelayo entliziyweni yam ngesilwanyana sasekhaya:
Khusela, uhlala evuya,
jonga kwisithandwa sam uFranchesca
ukuba uswele ukutya, akukho bhedi, akukho nkampani, akukho midlalo,
mgcine kuzo zonke izinto ezimbi, kuyo yonke ingozi nakwimeko embi;
Ungaze ube lusizi okanye uzive ulahliwe
ungaze usilele kuthando, ukukhathalela kunye nobuhlobo
ukuze angaze azive enoloyiko, uloyiko, okanye isithukuthezi,
soloko uphathwa ngothando nentlonipho
ukuhlala ugcwele uvuyo nentlalo-ntle
kwaye ube nobomi obude nobonwabisayo.
Ndiyakucela, Sikelela Roque osikelelekileyo ngempilo yakho,
Amazulu athumela ukuphiliswa,
ngokuzithemba okukhulu nangokholo, ndilushiya ezandleni zakho,
kumenze akhawuleze abe namandla kunye namandla
ukuze angabi sava ubunzima,
Ungavumeli ukubandezeleka okanye ukuva iintlungu,
Ibuyisela ukubandezeleka kwakho, iphilise amanxeba akho okanye kugula kwakho.
Ndiyalubulela uncedo lwakho ngala maxesha anzima,
Ndiyazi ukuba awuzukuyeka ukukhathalela iFranchesca
Kwaye xa uthathela izicelo zam kuNkosi,
ngubani odale zonke izinto eziphilayo ezizalise umhlaba
Ngothando kunye nobubele, ugcina kwaye aphathe zonke izidalwa zakhe.
Ngumxhasi wezifo ezabanjwa ziinkomo, izinja, abantu abakhubazekileyo, izifo ezikhoyo kunye nobunye ubunzima ngokwempilo yabantu nezilwanyana.
ICawa yama Katolika yenze umthandazo okanye imodeli yomthandazo efanelekileyo kwezi meko apho zizilwanyana ezibandezeleka kwaye zifuna nommangaliso waphezulu wokuphiliswa.
Ukwenza lo mthandazo akuyimfuneko ukulungisa imeko, nangona unokukhanyisa amakhandlela okanye wenze isibingelelo esikhethekileyo kule saint.
Unokuthandaza wedwa okanye njengentsapho, into eyimfuneko kwaye ekufuneka igcinwe ngamaxesha onke lukholo.
Ungcwele, ungcwele, uncede uninzi lwesifo sezigulana, iSanta Roque, ethe, enkosi yenceba kaThixo, yasebenza imimangaliso, abathe bakholelwa kuyo kumandla akho okuphilisa ...
Ndiyakubongoza, ngokuzithoba ngokunyanisekileyo, ndincede ndisindise inja yam kunye nomhlobo othembekileyo, ______, kwesi sifo, esimenze buthathaka kakhulu, wenza, waphakama kwaye wangcwele ongcwele ...
San Roque, ukuba uzithanda kakhulu izinja, kangangokuba inja yam iyaphilisa kwaye ibuye kwakhona yonwabile njengangaphambili.
Izinja ziyindalo kaThixo kwaye kufanele ukuba ziqwalaselwe kwaye zikhathalelwe.
Ngexesha apho isilwanyana sethu sihamba ngexesha elinzima lempilo singaphakamisa umthandazo kuSan Roque ukuba asinyamekele isilwanyana kwaye simnike ummangaliso wokuphiliswa.
Sinokucela kwezi zilwanyana zigulayo ezitratweni ukuze le ngcwele inesisa kwaye ingummangaliso ibanike impilo nenkathalo abayifunayo.
Elona xesha lilungileyo lokuthandaza kuku yiva imfuneko yokwenza oko.
Ilizwi likaThixo lithetha nathi ngomthandazo kwaye lisixelela ukuba, nangaliphi na ixesha xa sifuna uncedo, uBawo osezulwini uhlala ekulungele ukumamela imithandazo yethu.
Emva koko sinokuqonda ukuba akukho cwangciso oluthile nangona abanye bacebisayo ukwenza njalo. ekuseni kunye neqela losaphoInyani yile yokuba inokwenziwa nangaliphi na ixesha nakweyiphi na indawo.
Ewe, kuba xa wayephila yena ngokwakhe wahlaselwa sisibetho esifanayo nezo wayezikhathalela kwaye kamsinya emva koko wafumana unyango waphinda wanyamekela abaguli abaninzi kwizibhedlele ezahlukeneyo.
Ukusukela ngoko kwaye kude kube namhlanje uyakholelwa kumandla akhe angummangaliso okunceda abo bangabalulekanga.
Thandaza umthandazo kuSan Roque patron wezilwanyana ezilahlekileyo nezigulayo ezinokholo olukhulu.
Thandaza nawe lomthandazo oqinileyo
Umthandazo onamandla kakhulu kwi-Holy Michael ingelosi enkulu
Umthandazo kuSan Alejo yonke imihla